Munharaunda Normandy iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero munzvimbo chikamu France uye ari rwendo pfupi kubva Paris. Zviri kufamba yakakurumbira nzvimbo dzakawanda avo vanoda kusangana musimboti Northern France. Normandy ane zvose, kubva akapfuma munhoroondo kuti mazuva shure emakore, kuti zvinoshamisa nharaunda uye nemasango chili kuti achasiya iwe achida zvikuru. zvisinei, mumwe mukuru zvinokwezva Normandy ndiye incredible mapurani. Nharaunda musha hunoshamisa fairytale maguta kuti zvechokwadi anopamba fungidziro. The runako kuti blends nemisha izvi vakabatikana kunosiya zvakawanda tichishamisika. Nokuda incredible kukurumbira izvi mufananidzo-vakakwana nzvimbo, Save A Train akaisa pamwe mazita 5 maguta Fairytale kushanyira muna Normandy. Edza kuvabatanidzira rwendo rwenyu inotevera nguva yauri kufamba kuburikidza France.
Les Andelys ndiye zvose unofanira mutaundi quintessential French. The inofadza mutaundi zvakanaka pedyo Seine River. Kuwedzera napedyo kuti rwizi rwakanaka, Les Andelys zvakare ane zvinoyevedza zvikomo zvakasvibirira uye mawere machena machena akarikomberedza. Les Andelys ndiye mufananidzo-hwakakwana, chiri chikonzero nei vashanyi vakawanda snap mazana mapikicha muguta rino naka uye akaripoteredza cree.
Giverny chinonyanya kuzivikanwa kumba Claude changes raMwari. Claud changes kurenda pfuma iri 1880s nemhuri yake. Kwemakore rombo ake akatendeukira nani, uye akatonyanya garika. Naizvozvo, akakwanisa kutenga pfuma, uyewo vamwe akapoteredza dzacho. Changes akavaka Studio ikoko uye zvakasikwa yakawanda ake basa pamusoro pfuma, vakaisa Giverny pamepu. Kunze Giverny redzimba riri anofarira kuti changes, waivawo kumba mamwe impressionist Artists. Idzi dzinosanganisira Claude Cambur, Christophe Demarez, uye Ramier. Vapfumi Nhoroondo zvaunoswedera mune zvakawanda evanofarira kuti kuda kuwana upenyu uye mabasa incredible Artists izvi.
Pamusoro peiyo nhoroondo inonakidza yeguta, guta iri uyewo inozivikanwa kwayo wakajeka girl. Rakanga mumwe mukuru zvikonzero vemifananidzo akaida. Kuti chete mudano zvaunoswedera mu Vashanyi vakawanda nhasi. The fadza nyika anamapako, wakajeka mapindu, uye vakagwinya dzinongoitika ambiance muri kunofanira-Ona. Make sure to stop by Giverny if you are ever in the Eure region of Normandy.
Barfleur ane chiwanikwa akafanana hapana zvimwe. Kuwedzera picturesque zvinokukanganisa uye yakakura gungwa maonero, zviri zvakare kumusha nenhoroondo akitekicha. Chekutanga, mumigwagwa pachavo vari cobbled uye zvikuru kare. chepiri, akawanda ekare dzimba musi kudzokera remakore rechi16. The imba mukuru muguta odzokera zvikuru kupfuura kuti. Muna Sainte Catherine chivanze, unogona kuona imwe imba kuti yakatanga kuMiddle Ages. It ane mukova, masitepisi ekunze, uye mullioned mahwindo. Kunyange zvazvo Barfleur ari mutaundi duku, ndizvo inokosha kushanya if you are in the area.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Fairytale Towns To Visit In Normandy” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-towns-visit-normandy%2F%3Flang%3Dsn – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Fairytaletown frenchtowns Normandy Train Travel chitima kufamba Mazano travelfrance traveltips